Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka Somaliland Oo Sharaxaad Ka Bixiyay, Hawsha Xafiiskiisa, Shaqada Garyaqaanka Guud Ee Madaxweyne Siilaanyo Magcaabay Iyo Heshiisyo Somaliland Gashay – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka Somaliland Mr. Xasan Axmed Aadan, ayaa sheegay in xafiiskoodu aannu habayaraatee cidna dusha ka saarin dambi aanay lahayn, sidoo kalena aanay qofna ka dhaafin dembi uu leeyahay, isagoo dhinaca kalena ka hadlay dib-u-habayn lagu
sameeyey xafiiska xeer-ilaalinta iyo dumar hawlahaas ka shaqeeya oo dhawaan la magacaabay.
Mr. Xasan Axmed Aadan oo waraysi dheer maalintii Sabtida xafiiskiisa ku siiyey Jamhuuriya iyo shabakadda wararka Araweelonews, kaasoo aannu qaybtiisii hore idiinku soo gudbinay shebekada Araweelonews.com waxa uu qaybta labaad waraysigan oo aad u dheer kaga hadlayaa arrimo oo ay ka mid yihiin
dareennada shakiga leh ee dadweynuhu ka qabaan xafiiska xeer-ilaalinta, awoodaha shaqo ee ay kala leeyihii Garyaqaanka Guud ee Qaranka iyo Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranku, sida xafiiska xeer-ilaalintu ugu dhiirrado in qof dhan oo nool ay yidhaahdaan dil halagu xukumo iyo doorka Somaliland ee la-dagaalanka budhcad-badeedda.
Qaybta labaad ee waraysigaasina waxa uu u dhacay sidan:-
Su’aal: Xafiiska Xeer-ilaalinta Guud baryahan dib-u-habayn baad ku wadeen, waxaana nagu maqaallo ah in hawlwadeennada xafiiska Xeer-ilaalinta la kordhiyey oo dumar badan lagu soo kordhiyey oo ku-xigeenno Xeer-ilaaliyaha Guud loo magacaabay, hawsha xafiiska iyo dumarkaas la magacaabay warbixin naga sii?
Jawaab: Waa run oo waxa la qaatay toban xeer-ilaaliye oo jaamacadaha dalka ka qallin-jebiyey, sharciga shaqaaluhuna wuxuu sheegayaa in wiil iyo gabadhba shaqada loo siman yahay, waxana weeye kuwii u soo baxay ee sinnaanta lab iyo dheddigga (Gender) ku salaysnaa, waana shan gabdhood iyo shan wiil, wax weyna gabdhuhu caddaaladda way ka tarayaan, waxana dhaca kufsiyo, xadgudubyo carruurta iyo dumarka jira, markaa dumarku waxay ka cawdaan in ragga uunyihiin kuwa wax eedaynaya oo kiisaskoodii meel la iska dhigo, waanay noo fiican tahay inay garsoorka ku jiraan haweenku, xagga caddaymahana wax badan oon ragga loo sheegi karin oo dumarku gaar isugu sheegi karaan oo dhinaca caddaaladda ah waa loo baahan yahay.
Garsoorayaal ma aha [haweenku] oo garsoorayaasheenna sida nidaamkeenna iyo shareecadeennu qabto ayaa laga racayaa hadday xaq u leeyihiin iyo haddaanay u lahayn, mana odhanayno ma leh iyo way leeyihiin, waana arrin u taal garsoorka sare iyo Guddida Caddaaladda, xeer-ilaalintana siday bilayska ugu jiraan uunbay ugu jirayaan, waana arrimo farsamo, runtiina waa nalagu ammaanay, garsoorkaanay kicisay, ardayda jaamacadaha ayaanay dhiirrigelisay, qaar kalena iminkaannu qaadanaynaa.
Su’aal: Tobankan Xeer-ilaaliye-ku-xigeen ee la magacaabay sidee bay magacaabistoodu u waafaqsan tahay dastuurka iyo qaabka xafiiska Xeer-ilaalinta Guud?
Jawaab: Anigu ma magacaabo. Xeer-ilaaliyayaasha ayaan magacabaa anigu. Xeer-ilaaliye-ku-xigeennadana Xeer-ilaaliyaha Guud waxa magacaaba Guddida Caddaaladda, tobanka qof ee la soo magacaabayna waxa ansixiyey guddidaas.
Su’aal: Waxaad ka dhawaajisay in garsoorku madaxbannaan yahay, Guddida Caddaaladdana awoodda ugu badan leh, marka laga yimaad Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Xeer-ilaaliyaha Guud oo madaxweynuhu magacaabo, sida ku cad dastuurka xubnaha ugu badan guddida caddaaladdu waxay ku yimaaddeen digreeto madaxweyne; miyaan la odhan karin qodobka dastuurka laftiisa ayaa garsoorka dhaawacaya oo waxay ahayd in garsoorku ka madaxbannaanado awood dawladeed. Maaliyad ahaana garsoorku ma madaxbannaana arrimaha laftoodu miyaanay garsoorka dhaawac u geysanayn?
Jawaab: Marka la eego xubnaha guddida caddaaladda; afar nin waxa soo magacaaba golayaasha, xukuumadna may soo magacaabin, Guddoomiyaha Maxkamadda Sarena waad ogtihiin xasaanadduu leeyahay oo labada gole baarlamaan ayaa isugu taga ansixintiisa, waana nin haysta dammaanad adag oo xooggan oo ah inaannu u habran cidna, xubnuhuu madaxweynuhu soo magacaabana laba garsoore oo Maxkamadda Sare ku jira, kuwa kalena waa aniga. Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha iyo Agaasimaha Guud ee Caddaaladda, kuwaasina waxay ka yihiin kuwa ugu yar xubnaha guddidaas.
Su’aal:Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud waa xafiiska eedaha soo ooga, muwaaddiniinta amma siyaasi ha noqdo ama shacbi oo qof dhan baad ku doodaan in nafta laga jaro, ummadduna shakibay idinka qabaan oo waxay tidhaa xukuumadda ayaa dabada riixda, aragtida noocaas ah amma dadka eedaysanayaasha ah maxaad farriin u jeedin lahayd?
Jawaab: Danta caddaaladda ayaa sidan fartay in cidna wax eedayso, cidna difaacdo, cidna ka garnaqdo oo dhinacyadaas caddaaladdu ku dhisnaato ayaa looga baahday. Qaanuun iyo nidaam dawladnimo ayeynu samaysanay, qanuunkaas haddaanay cid ilaalinayn; ma aha dil uun ee waa in la ilaaliyo nidaamkii, kaannu leenahay dil ha lagu xukumanna waa mid nidaamkii jebiyey, qofka noocaas ah haddaan la ciqaabina oo qofka qof dila loo dilin, loona ciqaabin dalku wuxuu noqonayaa fawdo, kala dambayn iyo nidaamna ma jirayo, intaynu dhaano Soomaalida xabbadda isla dhacaysaana waa nidaamka iyo kala dambaynta oo la ilaaliyey. Xafiiska Xeer-ilaalintu cid aan dambi lahayn lama doono, cid dembi lehna ma dhaafayo.
Suaal: Adinku waxa tihiin Xeer-ilaalinta Guud ee Qaranka dhawaan waxa la magacaabay Xafiiska Garyaqaanka Guud ee Qaranka, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa waxyaabaha aad ku kala duwan tihiin labadiina xafiis?
Jawaab:Xeer-ilaaliyaha Guud: Dadka qanuunka aad u yaqaan way kala fahmaan, balse guudka. qaryaqaanka iyo xeer-ilaayaha ayaanay dadku kala sugi karin, laakiin annagu dambiga, sharciga iyo xadgudubyada ayaannu ilaalinaa, iyaguna waxa weeye dawladdu markay dhinac ka tahay arrimaha maddaniga ah oo ah heshiis ay gashay oo qareen bay u baahan tahay dawladdu markay is dacwaynayaan nin roodhi siiya iyo mid ciidammada bariiska u keenaa, dawladdu awood ay ku maquuniso ma leh oo waa dhinacyo heshiiyey. Markay heshiisyada dawladdu gasho shaadhka bannaankay iska dhigtaa, waxaanay u baahan tahay qareen.
Dawladdu danaheeda cid ilaalisa ayey u baahan tahay, illeyn maalin walba nin suuqa uga yeedhan maysee. Annagaa qaban jirnay, annagana hawshayada may ahayne waxay ahayd hawl xafiiskan oo aan dhisnayn awgeed dusha nalaga saaray. Annagu mar baannu maddaniga galnaa oo waa arrimaha waaweyn ee danta guud ku dhisan ee aanay dawladdu heshiis ku galin, xeerkaana na siinaya awooddaas; xeer ciqaabtu waa gaar oo iyagu shaqo kuma leh, keliya waxay qabtaan waa inay faafinta rasmiga ah soo saaraan iyo intaa yar ee maddaniga ah, markaa hawl badan oo ananga isaga kaaya xidhani ma jirto.
Annaga dastuurkaa na abuuray oo hay’ad ka ballaadhan baannu nahay, dastuurkuna in badan buu kaga hadlayaa hay’adda Xeer-ilaalinta Guud iyo waajibaadkeeda, markaa xafiiska Garyaqaanka Guud waxa lagu dhisay xeer hoose, isku ujeeddana maaha.
Su’aal: Arrimaha caalamiga ah markaynu ka hadlano laba xeer bay Somaliland ansixisay oo kala ah Xeerka La-dagaalanka Budhcad-badeedda iyo Xeerka Wareejinta Maxaabiista. Waxa la innagu ammaanaa inaynu budhcad-badeedda la-dagaalankeeda qayb laxaad leh ka qaadanno, shirkii London shirar kaloo ka dambeeyey oo ka dhacay Denmark oo aa adiguna ku lug leedahay way jiraan, arrimahaasna bal tafaasiil ka bixi?
Jawaab: Markii u dambaysay waxaan ku horreeyey Denmark waxaannu ahaa 11 March ee sannadkan, kadibna waxaan tegay Ingiriiska isla March. Shirka hore ee ka dhacay dalka Denrmark wuxuu socday dhawr maalmood, waxana lagaga hadlayey budhcad-badeedda iyo wareejinta maxaabiista oo ah labadii xeer ee aynu halkan ku ansixinay, waxana Somaliland lagu ammaanay inay ku soo biirtay iyadoon la aqoonsan waddamada la-dagaalama budhcad-badeedda, waxaanay keentay oo faa’iido ah in xeerarka caalamiga ah aqbalnay oo la yidhi dawladdaasi way aqbashay, Somaliland baana meesha lagu hadal hayeym ilaa lixdan dawladood wax ka badanna way fadhiyeen iyo hay’ado caalamiya sida Interpol iyo IOM, waxana lagu soo bandhigay heshiiskii Madaxweyne Axmed Siilaanyo iyo Madaxweynaha Sychelles kala saxeexdeen ee lagu qabtay London, kaasoo Ra’iisal-wasaaraha Ingiriiska Mr. David Cameron dhexdhexaadinayey, xeerarkeennii baana lagu soo bandhigay. Madal fiican bay ahayd oo Somaliland lagu ammaanayey, maalintaasina waxay ku soo beegantay maalintii Golaha Guurtidu ansixiyeen oo waxa la yidhi Somaliland Guurtideedii ayaa ansixisay.
Markaa kadib waxaannu tagnay Ingiriiska, waxaanan u tagnay arrimo la xidhiidha argagixiso la-dagaalanka, waxana nala socday wasiirrada Caddaaladda iyo Arrimaha Gudaha, nin Maxkamadda Sare la socday, asluubta, CID-da, Birmadka. Dhammaantayo waxa nala soo tusay siday hay’adaha caalamiga ah uga shaqeeyaan amniga, waxaanuna la kulanay Scoutland Yard, CPS oo xafiiskaygan oo kale ah oo la yidhaa Crown Prescution Serves; waxaannu la kulanay jeelka ugu weyn Ingiriiska; waxaannu la kulannay qolooyinka xabsiyada kormeera; waxaannu la kulanay Common Wealth. Hay’ado dhawr ah ayaa nala mariyey oo waayo-aragnimo wanaagsan ah. Waxay na tusaayeen adduunka waxa ka dhacay, waxa jira, caddaymaha, waxana la doonayaa inay tababaror aad u ballaadhan siiyaan Somaliland.
Su’aal: Dhinacaasi waa dhinacii wanaagsanaa, dhinaca kale waxa jira dad dhaliilaya arrimahaas oo leh waxa dhici karta in budhcad-badeeddii innagu soo jeesato oo muwaaddiniinta isaga kala goosha dhulalka Soomaalida lagula kaco dhibaatooyin aarsi ah, taasi miyaanay innooga iman karayn?
Jawaab:Anigu taas ma filayo. In badan baynu ka hadalnay, innaguna ma xukumayno, waana la inoola yimi. Mmaxkamadda Somaliland in lagu qaado xukuumaddu way ka diiday, waxaanay tidhi cadaawad bay nagu keenaysaa sidaas aad sheegtay, balse isku gudbinta maxaabiistu waa mid ka duwan, waana arrin bani’aadaminimo ah hadday qofka ka timaad, mana soo qasbayno qofka. Waddan kale oo aannu cimiladiisa aqoon bay afka uga galeen. Heshiiska waxaannu la galnay dalka Sychelles, ugu horrayna waa in qofku doonayo isagu, luqad ahaanna iyaga u fiican oo iyagoo ooyaya ayey yidhaahdeen Hargeysa ha nala geeyo, dadkooda iyo isaguna waa in raalli ka yihiin. Haddaannu doonayn annaguna diyaar u ma nihin, kuwa Puntland-ma waannu diidnay. Puntland-tan washwashta u haysa Somaliland anigu waxba uma arkee ee ay leeyihiin waannu idinka afduubaynaa, annaguba waannu afduubi karaynaa, awoodna waynu leenahay, waananaynu iska difaaci karnaa. Waa kuwa shishee ee koonfurta fog. Kuwa Puntland waxaannu nidhi iyagaaba ugu badan oo gidaarradooda inta katinado loogu sameeyo ha lagu xidho. DHAMMAAD….